जाडोमा हट साम्राज्ञी ! इन्स्टाग्राममा पोष्ट गरिन बोल्ड तस्बिर - जाडोमा हट साम्राज्ञी ! इन्स्टाग्राममा पोष्ट गरिन बोल्ड तस्बिर
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २२ कार्तिक, 10:43:40 PM
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रमा सर्वाधिक महंगी र माग भएकी नायिका हुन, साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह । भुवन केसी पुत्र अनमोल केसीसँग ‘ड्रिम्स’ चलचित्रबाट नेपाली फिल्म नगरीमा उदाएकी साम्राज्ञी अहिले एउटै फिल्मबाट १५ लाखसम्म पारिश्रमिक लिन्छिन ।
तर उनको चर्चा र माग फिल्ममा मात्रै छैन । सामाजिक सञ्जाल र खासगरी इन्स्ट्रागाममा पनि उत्तिकै छ । बढ्दो चिसो मौसममा उनले तीन वटा फोटो पोष्ट गरेकी छन । इन्स्टाग्राममा पोष्ट गरिएका तीनै तस्बिर हेर्नलाई मुटु बलियो पार्नुपर्छ । अनि कुनै धीत मरुञ्जेल हेर्न कुनै एकान्त ठाउँ हेर्नुपर्छ ।
आपत्तिजनक नै नभएपनि उनका फोटोहरु निकै बोल्ड छन । यी फोटोबाट पनि थाहा हुन्छ, साम्राज्ञी हट मात्रै छैनन । रेखा थापापछि नेपाली नायिकाहरुमा बोल्ड र उत्ताउली पनि बन्दैछिन ।
२०७५, २२ कार्तिक, 10:43:40 PM